Noteren'i Microsoft hanakana ny boot UEFI amin'ny fitaovana ARM | Avy amin'ny Linux
Taorian'ny adihevitra nateraky ny fitakian'i Microsoft hanana ny UEFI so it Windows 8 fanombohana, mamerina ny tantara indray ny orinasa, amin'ity indray mitoraka ity, mandrara ireo mpiara-miasa aminy izay manamboatra sy manangona solosaina tsy hanome safidy hanakanana ny asan'ny UEFI amin'ny maritrano. ARM raha te hahazo ny Fanamarinana kalitao de Microsoft amin'ny vokatrao.
Tamin'ny voalohan'ny volana desambra dia nanoro hevitra ny Office of Copyright ny Software Freedom Law Center (SFLC) fa ny mpivarotra rafitra miasa dia mampiasa ny rafitry ny booty azo antoka UEFI (Unified Firmware Extensible Interface) amin'ny fomba fanoherana ny virus. manilika ireo rafitra miasa hafa.
Araka ny voalazan'i Glyn Moody, Microsoft dia nandany fotoana kely tamin'ny fanovana ireo fepetra takiana amin'ny Windows Hardware Certification mba handrarana ny ankamaroan'ny rafitra fikirakirana hafa amin'ny fitaovana miorina amin'ny processeur ARM izay navotsotra niaraka tamin'ny Windows 8. Ny Free Software Foundation dia manana fampielezan-kevitra manohitra an'io.
Ny fepetra takiana amin'ny fanamarinana dia mamaritra (amin'ny pejy faha-116) fomba maodely azo antoka "voaaro", izay ahafahan'ny mpampiasa manatrika ara-batana manampy sonia ho an'ny rafitra fiasa mifandimby ao amin'ny tahirin-tsoratry ny rafitra, mamela ny rafitra hanafika ireo rafitra miasa ireo. Fa ho an'ny fitaovana ARM, voarara ny maody manokana: "Ao amin'ny rafitra ARM, voarara ny mamela ny maody manokana. Ny maody mahazatra ihany no azo alefa. " Ireo mpampiasa koa dia tsy hanana safidy hanakanana fotsiny ny Secure Boot, ny fomba fanaon'izy ireo amin'ny fitaovana tsy miorina amin'ny ARM: "Disable Secure Boot TSY MAINTSY azo atao amin'ny rafitra ARM." Eo anelanelan'ireto fepetra roa ireto, izay fitaovana ARM izay mandefa ny logo Windows 8 dia tsy afaka mihazakazaka rafitra miasa hafa mihitsy, raha tsy vita sonia miaraka amin'ny lakile efa nialoha entana na misy lesoka fiarovana izay mamela ireo mpampiasa handalo ny fiandohana azo antoka.
Na dia natao hiarovana ny filan'ny mpampiasa aza ny UEFI Secure Boot, ireo famerana tsy fenitra ireo dia tsy misy ifandraisany amin'ny fiarovana. Ho an'ny rafitra tsy miorina amin'ny ARM, takian'i Microsoft ny hampandehanana ny maody manokana - fangatahana tsy mifanaraka raha toa ka mandrahona ny filaminana ny maody manokana. Saingy ny tsenan'ny ARM dia hafa amin'ny Microsoft amin'ny fomba telo lehibe:
Tsy mitovy amin'ny ARM ireo mpanamboatra fitaovana enti-miasa Microsoft. ARM dia liana amin'i Microsoft noho ny antony voalohany: ny fitaovana finday rehetra mihazona ny rafitra fikirakiran'ny Windows Phone dia mifototra amin'ny ARM. Mifanohitra amin'izany kosa, Intel dia manjaka amin'ny tontolon'ny PC. Any, ny fepetra takiana amin'ny Microsoft azo antoka dia mamela ny mpampiasa manampy sonia amin'ny maody maody na manafoana ny boot azo antoka tanteraka - manaraka akaiky ny tolo-kevitry ny forum UEFI izy ireo, izay mpikambana mpanorina i Intel. Microsoft dia tsy mila manohana programa lova amin'ny kinova Windows an'ny ARM. Raha manidy ny rafi-piasana tsy misy sonia amin'ny solosaina PC vaovao i Microsoft dia mety hanakorontana ireo mpanjifany manokana izay aleony ny Windows XP na Windows 7 (na, i Vista, ohatra). Saingy raha tsy misy izany filàna izany hanohanana ireo rafitra lova amin'ny ARM, dia dodona ny hampigadra ireo mpampiasa i Microsoft.
Microsoft dia tsy mifehy ampy ny tsena amin'ny fitaovana finday mba hampisy ny ahiahy amin'ny fanararaotana ampihimamba. Na dia tsy manana ny ampihimamba amin'ny PC an'ny Microsoft aza i Microsoft tamin'ny taona 1998, rehefa notsaraina noho ny fanitsakitsahana ny ampihimamba izy dia mbola mifehy ny 90% ny tsena ho an'ny rafitra fikirakirana PC - ampy hampisaintsainana azy ireo izany amin'ny fandraràna ireo rafitra miasa izay Aza Windows avy amin'ny solosaina Windows 8 fa mandondona ny varavaranao ny mpanara-maso. Fa amin'izao fotoana izao dia afaka mampiasa ny fihetsika manohitra ny fifaninanana amin'ny fitaovana ARM izy io.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » FampiasanaLLL's UseLinux » Hanery ny sakana UEFI amin'ny fitaovana ARM i Microsoft
Mampalahelo ny zavatra Microsoft, saingy tsy dia ratsy toa an'i Canonical na Red Hat, vonona ny hanaiky lembenana amin'izany ary handoa ireo mari-pankasitrahana araka ny nambaran'i Red Hat (Fedora). Mampalahelo tokoa, fa ny mahatsikaiky dia ny hoe tsy mikitika na manapaka ny mpanjifa farany. Mividy PC ianao fa tsy afaka misafidy OS hampiasaina…. tsy ara-dalàna mihitsy aza.
Valiny tamin'i Nashua
Tsy manahy ahy izany. Hofaranantsika ny fanambarana izany.
(Ny harivan'alina dia handeha ho amin'ny fahaleovan-tena ny rehetra)
Ivansakbe dia hoy izy:
ary hoy izy ireo fa tsy monopole ny Microsoft
Mamaly an'i Ivansakbe
Tokony raran'izy ireo ny fivarotana an'ity karazana Hardware ity. Raha tsy azo ampidirina amin'ny firenena "X" ity karazana Hardware ity dia very ny lalan-drà ary tsy hampihatra an'io teknolojia fanoherana fifaninanana io ny orinasa mivarotra ny Hardware.
Darumo dia hoy izy:
Saingy, tsy misy izany, zavatra iray ihany no ho tratrarina, fa ny fiarovana ny UEFI dia ho simba na ho ela na ho haingana, arakaraka ny sakana apetrak'izy ireo no vao may ny olona liana amin'ny crunch azy ireo.
Mamaly an'i Darumo
Taratra mahaliana ... tena azo atao izany ...
miguel pozuelos dia hoy izy:
Raha ny marina, tsy miteny aho ... nividy milina misy windows 8 efa napetraka ... Tsy mimenomenona aho, tsara ary tsara kokoa ny mandroso amin'ny windows 10, fa noho ny antony misy azy dia mila mametraka banky aho. programa izay tsy fantatro no nohavaozina, mila windows 7 farany aho ary ity milina ity dia tsy azo ampiasaina ho amin'izany tanjona izany …… ..haka? fahadisoam-panantenana. Novidiko ny pc fa tsy ny OS.
Mamaly an'i miguel pozuelos
Ahoana ny fanitsiana tsara ny loko ao amin'ny GIMP